मदनले राजाको श्रीपेच फ्याँके, आज केपीले त्यो श्रीपेच उचालेर बिधाका टाउकामा टक्र्याए ! – Todays Nepal
मलाई मनपर्ने थोरै नेतामध्येका एक हुन् लालबाबु पण्डित।नरम स्वभाव तर कडा प्रस्तुती यिनका बिशेषता हुन्।दुई बर्ष सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेका यिनले धेरै उदाहरणीय काम गरेका छन्।
पिआर पाएर पनि सरकारी पदमा लिसोजस्तै टाँसिएका भातमारा कर्मचारीहरुको ब्याण्ड राम्रैसँग बजाएर तिनको दोहोलो काढेदेखि यिनी मलाई असल राष्ट्रभक्त लागे र अझैपनि मलाई लागेकै छन्।
तर पछिल्लो समयमा बिदेशमा अनेक कारणले बिभिन्न मुलुकमा छरिएर बाध्यताबस् पिआर लिने नेपालीहरुलाई “ भूतपूर्व नेपाली “ को ट्याग भिराएर राष्ट्रबादको सिउर लगाउन भ्याईसकेछन्।
यो कुरामा मेरो ठूलो आपत्ति छ। हुनत म पनि बिदेशमै छु तर पिआरधारी होईन। केहि समय बिदेश बसेर थोरै कमाएर थोरै सिकेर आफ्नै देशमा फर्केर देश बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ र केहि समय बिदेशिएका युवाहरुले पनि आफ्नै घर फर्कनु पर्छ भन्ने अभियानमा हामी युवाहरु जुट्दै पनि छौं।
तर बाध्यात्मक परिस्थितिले पिआर लिएकाहरुलाई नेपाली नै नसोच्ने अर्धचेतन मानसिकताको शिकार लालबाबु जस्तो राष्ट्रभक्तले कदापी बन्नु हुँदैन।आफ्नो घरका बाबुको हालत ठीक भए कसैले पनि छिमेकी काकाको घरमा हली बसेर तिनै काकाको धर्मपुत्र बन्दैन होला।
त्यसैले बिदेशिएका नेपालीहरुलाई गाली गरेर , थर्काएर, ग़ैर नेपालीको उपनाम दिएर केहि समय चर्चित हुनुभन्दा बरु कसरी देशको गरिबी, अशिक्षा र बेरोज़गारी हटाएर सकेसम्म युवाहरुलाई नेपालभित्रै अवसर दिन सकिन्छ भन्नेतिर सोच्दा राम्रो हुन्छ।
एकपल्ट त्रिभुवन अन्तरार्ष्ट्रिय बिमानस्थलमा हातमा पासपोर्ट , मनमा देशप्रेम र थाप्लामा साउको ऋणको बोझ बोकेर लाईन लागेका मलिन अनुहारहरु हेरेर देश समृद्द बनाउन तिर कहिले लाग्ने नेता ज्यु? जो सुकै नेता होस् कि सेता होस् बोल्न र गाली गर्न पायो भन्दैमा जे पायो त्यहि भन्न वेलुनको राजगद्दिमा पिँध बिसाएका कुनै कृत्रिम महाराजलाई छुट छैन।
लालबाबु अहिले पनि ठाँउमै पुगेका छौ, त्यो अग्लो ठाउँबाट तिमीले बोलेको सबैतिर सुनिन्छ, त्यसैले पहिले देशभित्रकै बेथितिहरु साम्य पार। पहिले लुगासमेत सब्ल्याँटो बिब्ल्याँटो के हो थाहा नहुनेहरुले लाम लागेर राजा फ्याले, अहिले तिनै पाखण्डीहरु गणतन्त्रका कथित राजारानी भए।
मदनले राजाको श्रीपेच फ्याँक्ने क्रममा आफ्नो ज्यान नै भिरलाई चढ़ाए। आज केपीले त्यो श्रीपेच उचालेर बिधाका टाउकामा टक्र्याए।
यसरी हामी सर्वसाधारण फेरि जनताबाट प्रजा मै झर्यौं। सरकार तिम्रै पार्टीको छ त्यसैले दबाब त्याँ देऊ। तर पिआरधारी नेपालीहरुलाई भूतपूर्व नेपाली भनेर भाषण नठोक। जस्ले जति राष्ट्रबादी हुँ भनेर फुँई लडाएपनि नेपालमा जन्मिएर आधा आयु नेपालमै बिसाएकाहरुलाई नेपाली नदेख्ने र आफ्नै रगतको अपमान गर्ने जो केहि होस् , त्यो देशभक्त हुँदै होइन..!
जो जता बसे पनि उस्को मेहनतले बसेको छ। बिकाश र समृदिका भाषण चुट्न मात्र होईन,सबैको सम्मान गर्ने संस्कार पनि नेताले सिक्नु पर्छ।हिजो को हिरो लालबाबु फेरि जिरोमा नझर्नु । यो मेरो अनुरोध हो, यो कुरो कसैले पुर्याईदिनुस् पण्डित बाजेका कानसम्म।
सम्झनामा, श्रीकृष्ण र श्वेता बिवाह बन्धनमा बाधिंएको कालो त्यो दिन ! भिडियो भयो भाइरल